सम्पत्तिले आफ्नालाई पनि कसरी पराई बनाउछ ? परिवार भाँडिएको एउटा पीडा ! – पुरा पढ्नुहोस्……
सम्पत्तिले आफ्नालाई पनि कसरी पराई बनाउछ ? परिवार भाँडिएको एउटा पीडा !
काठमाडौं । सम्पतिकै लागि आफन्तहरुले आफ्नै घरकालाई पनि बिर्सिन्छन् । मानवता त छँदै छैन । पैसाको पावर पनि कस्तो ? पीडित प्रमाणले मुद्धा लड्छन् पीडक पैसाले ।
यस्तै हालतभएको छ, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, वडा नं. ९ मा बस्दै आएका एक दम्पतिको । आफ्नो पुख्र्यौली सम्पति र आफ्नो जीवनभर कमाएको पसिना पाउनलाई उमेरले ८ दशक पार गरिसकेका कृष्णदत्त जोशी र श्रीमती सुनमती देवी जोशी अहिले अदालत धाईरहेका छन् ।
कृष्णदत्त जोशीका बुबाले दुई बिहे गरे । बुबा जोशीले सौतेनी आमा घरमा भित्र्याएपछि आफ्नो भाई हरिलाल जोशी ३ वर्षको उमेरमै टुहुरो हुनपुगे । त्यसोत दाजु कृष्णदत्त जोशीले आफ्नो भाई हरिलाल जोशीलाई आफ्नो आमा र बाबु दुवैको माया दिएर हुर्काए, बढाए र पढाए पनि ।
दाजु कृष्णदत्तले काठमाडौंमा सुरक्षा गार्ड बसेर महिनाको महिनाको ३० रुपैयाँ कमाउँथे । १५ वर्षसम्म सोहीकाम गरेका कृष्णदत्त भारतको बैंगलोरमा काम गर्न पुगे र भाई हरिलाल पनि त्यही गए । सँगै काम गरे र दाम पनि कमाई गरे । कमाई गरिसकेपछि जोशी दाज ुभाईले त्यही बैंगलोर घर पनि किनेका थिए ।
तर पछि आएर बैंगलोरको घर बेचेर जोशी दाजुभाईले नेपालकै धनगढीमा घर जग्गा जोडे । बुढेसकाललागेपछि जोशी दाजुभाई मिलेर बराबर अंशवण्डा गर्न राजीभएका थिए । तर भाई हरिलाल जोशीकी श्रीमती कलामती जोशीले यो कुरालाई अस्वीकार गरिन् । यसै सन्दर्भमा उनका श्रीमान हरिलाल जोशी पुरानै कामका लागि बैंगलोर फर्के ।
भाई हरिलाल जोशीको आकस्मत काम गरीरहेकै ठाउँमा मृत्यु भयो । यस्तो दुःखद अवस्थामा श्रीमती कलामती जोशीले आफ्नो श्रीमानको शवलाई नेपाल नल्याई भारतमै अन्त्येष्टि गर्न भनिन् । उनको सल्लाह अनुसारनै उनको श्रीमान हरिलाल जोशीको अन्त्येष्टि भारतमै गरे । कम्पनीले हरिलालको मृत्यु पश्चात ८ लाख रुपैँया श्रीमती कलामतीलाई पठाईदियो ।
यता नेपालमा हरिलालका श्रीमती कलामती भने पुरानै अडानमा बसिरहेकी थिईन् की भएभरको सबै सम्पतिआफ्नो नाममा हुनुपर्छ । हरिलालका दाई कृष्णदत्त जोशीभने आफुले जीवनभर कमाई गरेको कुनै पनि सम्पति नपाउने भएपछि आफ्नो पुख्र्यौली सम्पति र दाजुभाई मिलेर कमाई गरेको सम्पतिको आधा सम्पति पाउँ भन्दै धनगढी जिल्लाको मेलमिलाप केन्द्र पुगे ।
धनगढी मेल मिलाप केन्द्रले कृष्णदत्त जोशी र श्रीमती सुनमती देवीजोशीको माग अनुसारनै पक्ष र बिपक्षबिच पहाड र तराई जग्गा सम्पति बराबर बाँड्नु भन्दै मिलापत्र गरीदिए ।
तर, मिलापत्र भईसकेपछि पनि कृष्णदत्त र सुनमती देवीले पाउनु पर्ने आफ्नो सम्पति पाउन सकेनन् ।
सुनमती देवीका देउरानी कलावतीलाई उनका आफ्नै आफन्तले एकान्तमा बोलाएर कुरा बङ्गाईदिए भन्दै सुनमती देवी भन्छिन्, ‘‘मेल मिलाप गरीसकेपछि कलावतीलाई उनका आफन्त यज्ञराज जोशीले एकान्तमा बोलाएर भएभरको सबै सम्पतीको लोभ देखाएर उचालिदियो । उनकै कुरा सुनेर कलावती यज्ञराज सँग मिल्नगए ।’’
त्यसपछि कृष्णदत्त र श्रीमती सुनमती दीपायलको अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे । तर दिपायलको अदातलले त झनथप पीडा मात्रथपिदियो । ‘आफुलाईजानकारी नदिईकनआफ्नो मुद्धालाई खारेज गरिदियो ।’ पीडित सुनमतिले भनिन् ।
दीपायलको अदालतले पनि आफुहरुलाई न्यायदिन नसकेपछि कृष्ण दत्त र श्रीमती सुनमती देवी काठमाडौंको सर्वोच्च अदालतको पाउमा आईपुगे । सर्वोच्चले आफुलाई न्याय गर्ला भन्दाभन्दै कृष्ण दत्त र सुनमतीको यतिका दिन बितिसक्यो । सर्वोच्चले अंशवण्डा नगरिएको कारण आफुले पाउने अंश पाउने भनि निश्सा –निश्चय प्रमाण दियो ।
साथै सर्वोच्चले सम्पति विवरण पनि माग्यो र सर्वोच्चको मागअनुसार नै कृष्णदत्त र सुनमती देवीले सम्पति विवरण पनि बुझाए । यसरी सर्वोच्चको मागअनुसार सम्पति विवरण बुझाए पनि अहिले सम्म फैसलाभने हुन सकेको छैन । यसरी सर्वोच्चले फैसला नगर्दा निरास भएकी सुनमती देवी भन्छिन्, ‘‘पेसी सरेको सरकै छ । १२ पेसी सरीसक्यो ।’’
पीडित सुनमती देवी भन्छिन्, ‘सर्वोच्चले बयानको लागिपनि बोलाएको थियो । हामीलाई बोल्न दिइएन । न मलाई बोल्न दिईयो न मेरो वकिललाई नै । तर प्रतिवादीलाई २० मिनेट बोल्न दिईयो ।’’
अब सर्वोच्चले यही फागुन २० गते सादा हाजिरको लागि बोलाएको सुनमती देवी बताउँछिन् । यसरी आफ्नै सम्पति पाउनकै लागि अदालत धाईरहेकी सुनमतीका देउरानी कलावती भने आफुले पैसाले मुद्धा लडिरहेको बताउँछिन् ।
सुनमती देवीले गुनासो गर्दै भन्छिन्, ‘मेरो श्रीमानले उनको श्रीमान हरिलाललाई तीनवर्षको टुहुरो देखि पालेकाथिए । त्यही कलावतीकै कारण धेरै कुटाई पनि हरिलालले खाएका थिए ।’’
सुनमती देवी भन्छिन्, ‘‘देउरानी कलावतीले विभिन्न अपशब्द बोल्ने, गालीगलौज गर्नुका साथमा मुख छाड्ने बानीका कारण म मेल मिलापमा पनि जान चाहन्न । हामीले पाउनु पर्ने आधा सम्पति पाउनुपर्छ ।’’
उनले आफुले प्रमाणसँग मुद्धा लडेको बताउँदै आफ्नो आधा अंश पाउनुपर्ने दाबी गर्छिन् । बोल्न नसक्ने र बोलीदिने मान्छे नभएपछि अदालतहरु पनि पीडककै सपोर्टमा उभिएको देखिन्छ । कृष्णदत्त र सुनमती देवीको यस्तो यो पीडामा अदालतले पीडितलाई न्याय नदिइ पीडकलाई साथ दिइरहेको आभाष सबैलाई भएको छ ।
Prevयुएईमा मोटरसाइकल दुघर्टनामा परि गम्भिर घाइते भएका दुई नेपाली जेल परे, जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने…विस्तारमा हेर्नुहोस
Nextबिश्व भरिका ध्यान किन केन्द्रित हुदैछ सिरियामा, एक मर्म स्पर्शी भिडियो
कान्छा अभियन्ता केपी खनालले प्रशंसा गरेर थाकेनन रवि लामिछानेको, सावित्री सुवेदीलाई दिए मुख भरीको जवाफ-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
लुकाईछिपाई लगाईएको अवैध गाँजा खेती, प्रहरीद्वारा फडानी….
आजको राशिफल: वि.सं. २०७४ चैत्र २५ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल ०८ तारिख